တရုတ် 4.0mm5.0mm ဗီနိုင်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူကိုနှိပ်ပါ Karlter
ဖော်ပြချက်: Luxury PVC ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းကလစ်နှိပ်ပါစနစ်
အထူ: ၄.၀ မီလီမီတာမှ ၅.၀ မီလီမီတာ
အလွှာဝတ်ဆင်သည် - 0.3mm ~ 0.50mm
အရွယ်အစား：6 '' X 36 '' / 6''X48 '' / 7''X48 '' / 8''X48 '' / 9''X48 '' / စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း
ထည့်သွင်းမှု - သော့ခတ်ကိုနှိပ်ပါ
ကိုနှိပ်ပါဗီနိုင်းပျဉ်ကြမ်းပြင်အင်ဂျင်နီယာ, ရေပေါ်ဗီနိုင်းကြမ်းပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကလစ်ကိုဗီနိုင်းပျဉ်ပြားသည်သင့်အိမ်၏နေရာအတော်များများတွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင့်အိမ်၏areasရိယာများတွင်လှပသောသစ်သားဖြင့်ကြည့်ရှုရန်လာသောအခါမှိုများ၊ ရေချိုးခန်းများနှင့် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများသည်အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါ။ ဗီနိုင်းပျဉ်ပြားကိုသင့်အိမ်၏“ စိုစွတ်သော” ဒေသများ၌မေးမြန်းစရာမလိုပါ။ DIY နှစ်သက်သူမည်သူမဆိုအချိန်တိုအတွင်းနားလည်နိုင်သောလှပပြီးတတ်နိုင်သောကြမ်းပြင်။
Click LVT ကြမ်းပြင်၏အားသာချက်များ
Vinyl ၏ရေစိုခံတည်ဆောက်မှုသည်သော့ခတ်စနစ်အထိကျယ်ပြန့်ပြီးရာသီဥတုဒဏ်ကိုအဆက်မပြတ်တွန်းလှန်နေရသောစီးပွားဖြစ်ဆက်တင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဗီနိုင်းပျဉ်ပြားသည်ရေစိုခံနိုင်သည့်အပြင်သင့်အိမ်သို့ထိုလှပသောဗီနိုင်းပျဉ်ပြားများကိုမည်သည့်အခန်းများတပ်ဆင်နိုင်သည်ကိုအကန့်အသတ်မရှိပေးထားသည်။ ကလစ်နှိပ်ပါဗီနိုင်းပျဉ်ပြားနှင့်အတူ, သင်ကြမ်းပြင်၏ရွေးချယ်မှုအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ကလစ် vinyl ပါဝင်သော installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများ၊ လက်သည်းများနှင့်ကော်များမလိုအပ်ပါ။ သင်ကဗီနိုင်းပျဉ်ပြားကိုတပ်ဆင်ရန်အစုတခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းစွာသောသော့ခတ် system ကို groove အတူတကွတန်းတူနှင့်ပျဉ်ပြားကြမ်းပြင်ဖို့! သင်အလွှာကိုကြမ်းပြင်တပ်ဆင်ထားပါကအခွင့်အလမ်းများရှိနေနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်နီးပါးအတူတူပင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကလစ်နှိပ်ပါဗီနိုင်းကြမ်းခင်းကို install လုပ်ရန်အခက်အခဲရှိလိမ့်မည်! နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာရေပေါ်ကြမ်းခင်းကဲ့သို့ပင်သင်တပ်ဆင်ပြီးပါကသင်၏ကလစ်နှိပ်ပါဗီနိုင်းပျဉ်ပြားပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့ရန်လိုအပ်သောကော်၊ နှာကြောင်းဖြည့်ကော်သို့မဟုတ်ကော်မရှိပါ။ ကလစ်နှိပ်ပါဗီနိုင်းပျဉ်ကြမ်းပြင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အချိန်တိုအတွင်းအတွင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်၏အခန်းအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ သင်၏အိမ်၏mostရိယာအများစုသည်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတစ်လျှောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောဗီနိုင်းပျဉ်ပြားကိုအလွယ်တကူနှိပ်နိုင်သည်။ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါဗီနိုင်းပျဉ်အခင်းသည်သင်၏အိမ်၌တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနီးပါးအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သင်၏အိမ်၏အသွင်အပြင်ကိုလန်းဆန်းစေသည့်အခါဗီနိုင်းပျဉ်ပြားခင်းကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာပြီးတပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဗီနိုင်းပျဉ်ပြားကိုရွေးချယ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအခင်းဖြစ်သည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေအနေများမှသည်လူနေအိမ်အခြေအနေများအထိ၊ ဗီနိုင်းပျဉ်ပြားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တတ်နိုင်မှုနှင့်ဝတ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါသက်တမ်းရှည်စေလိမ့်မည်။ ဗီနိုင်းပျဉ်ပြားကိုကလစ်နှိပ်ပါကအနာဂတ်အတွက်စားသုံးသူနှင့်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည့်ရွေးချယ်မှုများကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။
ရှေ့သို့ 2.0mm ကော် Down
နောက်တစ်ခု: 5.0mm SPC ဗီနိုင်းအခင်း
5.0mm SPC ဗီနိုင်းအခင်း
EIR SPC ဗီနိုင်းအခင်း
ချောင် lay ဗီနိုင်းအခင်း